Filozofia Sakafo - Fomba iray ahafahana mihinana
Filozofia Teoria & hevitra
Fitsipika momba ny fomba fiasa mahazatra amin'ny sakafo
Ny fanontaniana filôzôfôma tsara dia mety hipoitra avy any amin'ny toerana rehetra. Efa nieritreritra ve ianao, ohatra, fa ny fampakaram-bidy tsara amin'ny filozofia mieritreritra ny mipetraka midina amin'ny sakafo hariva na mandehandeha any amin'ny fivarotana lehibe? Izany no filozofa voalohany indrindra amin'ny filozofian'ny sakafo.
Inona no atao hoe philosophique momba ny sakafo?
Ny filôzôfian'ny sakafo dia mahita ny fototry ny hevitra hoe fitaratra ny sakafo. Mety ho renao angamba ilay hoe 'isika no mihinana.' Eny ary, betsaka kokoa ny miresaka momba io fifandraisana io.
Ny sakafo dia mirona amin'ny fanaovana ny tenany, izany hoe ny hamaroan'ny fanapahan-kevitra sy ny toe-javatra izay mitondra antsika hihinana ny fomba ataontsika. Ao amin'izy ireo dia afaka mahita taratra iray amin'ny endriky ny endriky ny tenantsika manokana isika. Ny filôzôfia amin'ny sakafo dia misaintsaina momba ny lafiny ara-batana, ara-politika, ara-tsosialy, ara-javakanto, ary endriky ny endriky ny sakafo. Izy io dia misedra ny fanamby mba hisaintsaina bebe kokoa ny sakafo sy ny fahazarana misakafo mba hahafahantsika mahatakatra hoe iza moa isika amin'ny fomba lalina kokoa sy marina kokoa.
Sakafo ho toy ny fifandraisana
Sakafo ny fifandraisana. Ny zavatra iray dia ny sakafo afa-tsy amin'ny fikambanana sasany, amin'ny toe-javatra maro. Ireo, aloha indrindra, dia tsy maintsy miovaova manomboka amin'ny fotoana fohy. Ohatra, ny kafe sy ny fofona dia sakafo matsiro na tolakandro amin'ny tolakandro; Na izany aza, ho an'ny ankamaroantsika dia tsy mety ho an'ny sakafo hariva. Faharoa, ny toe-javatra dia tsy maintsy ampidirina ireo fitsipika izay, mifanohitra amin'izany, farafaharatsiny. Lazao, tsy mihinan-kanina any an-trano ianao, fa eo an-tanety kosa no misy anao.
Ao amin'ny fivarotana lehibe, ianao ihany no mividy hena tsy voajanahary, fa amin'ny fialantsasatra, maniry mafy ny McBurger miaraka amin'ny fries. Noho izany, ny 'sakafo fifandraisana' dia voalohany sy ambony indrindra amin'ny fitaratra amin'ny mpanety: arakaraky ny toe-javatra, dia maneho ny zavatra ilaina, fahazarana, faharesen-dahatra, fanoloran-kevitra ary ny marimaritra iraisana.
Ny lafiny ara-pihetseham-po filôzôfôma indrindra amin'ny toe-tsaintsika angamba dia ny faharesen-dahatry ny fitsipika mifehy azy. Hihinana saka ve ianao? A bit of a bunny? Nahoana? Azo inoana fa ny antony omenao ny toeranao dia fototry ny fitsipika etika, toy ny hoe: "Tia saka be loatra ny mihinana azy ireo!" Na ny hoe "Ahoana no ahafahanao manao izany?" Na, mandinika ny zava-maniry : Ireo izay mifanaraka amin'io fihinana io dia manao izany mba hisorohana ny herisetra tsy ara-drariny atao amin'ny biby ankoatra ny maha-olombelona. Ao amin'ny Animal Liberation , Peter Singer dia nanonona ny "karazana" ny fihetsik'ireo izay manavaka ny tsy fitoviana eo amin'ny Homo sapiens sy ny karazana biby hafa (toy ny fanavakavaham-bolon-koditra dia manavaka ny fifaninanana iray sy ny hafa rehetra). Mazava fa ny sasany amin'ireo fitsipika ireo dia mifangaro amin'ny foto-pinoana: ny fahamarinana sy ny lanitra dia afaka miara-misakafo eo amin'ny latabatra, tahaka ny ataony amin'ny fotoana hafa.
Sakafo ho an'ny zavakanto?
Azo atao ve ny sakafo? Afaka miezaka ve ny cook mba ho mpanakanto miaraka amin'ny Michelangelo, Leonardo, ary Van Gogh ? Ity fanontaniana ity dia niteraka adihevitra mafana tao anatin'ireo taona lasa. Ny sasany dia niady hevitra fa ny sakafo dia (amin'ny tsara indrindra) ny zavakanto madinika. Noho ny antony telo lehibe. Voalohany, satria ny sakafo dia maharitra ela raha ampitahaina amin'ny, ohatra, vato marbra.
Faharoa, ny sakafo dia mifamatotra amin'ny tanjona azo ampiharina - sakafo. Fahatelo, ny sakafo dia miankina amin'ny lalàm-panorenana ara-materialy amin'ny fomba iray izay tsy misy mozika, loko, na sary sokitra mihitsy aza. Ny hira tahaka ny "Yesterday" dia navoaka tamin'ny vinyl, cassette , CD, ary amin'ny mp3 ; Tsy azo ampiasaina ny sakafo. Ny mpahandro tsara indrindra dia mety ho mpahay asa tsara tokoa; Afaka miaraka amin'ny mpanambady marevaka na mpamboly mahay izy ireo. Amin'ny lafiny iray, mihevitra ny sasany fa tsy rariny io fomba fijery io. Ny Cooks dia vao haingana no manasongadina ny fampisehoana an-tsehatra ary toa manambany ny fanamarihana teo aloha. Angamba ilay tranga malaza indrindra dia i Ferran Adrià, ilay chef Katalana izay nanova ny tontolo niompy nandritra ny telopolo taona farany.
Ny Amerikanina dia mitazona am-pitiavana ny anjara toeran'ny manampahaizana sakafo; Frantsay sy Italiana malaza tsy manao izany.
Angamba, noho ny fomba samihafa tokony hijerena ny fomba fanombanana ny sakafo. Io serivisy frantsay iva io ve no marina? Ny fanamarihana dia milaza fa tsara ny divay: moa ve ilay raharaha? Ny fanandramana sakafo na famafàna divay dia azo lazaina ho fanatanjahan-tena, ary resaka fanombohana izany. Na izany aza, misy ve ny fahamarinana momba ny sakafo? Ity no iray amin'ireo fanontaniana sarotra indrindra momba ny filôzôfia. Ao amin'ny lahatsorany malaza "Of the Standard of Taste", David Hume dia maneho ny fomba ahafahan'ny olona iray hamaly ny "Eny" sy ny "Tsia" ho an'io fanontaniana io. Etsy an-daniny, tsy ny zavatra niainanao no nananako, ka dia tanteraka tanteraka izany; Etsy ankilany, raha manome fahaizana ampy tsara, dia tsy misy zavatra hafahafa amin'ny fisainana hametrahana ny hevitry ny mpandinika momba ny divay na ny trano fisakafoanana iray.
Ny ankamaroan'ny sakafo nividianay tao amin'ny fivarotana lehibe dia mitondra ny marika "zava-misy ara-sakafo". Ampiasaintsika izy ireny mba hitarihana ny tenantsika amin'ny sakafo, mba hijanona ho salama. Nefa, inona no tokony ataon'ireo tarehimarika ireo amin'ny zavatra ananantsika eo anoloantsika sy amin'ny vavonintsika? Inona no "zava-misy" ataon'izy ireo manampy antsika hamorona tena? Azo raisina ho siansa voajanahary ve ny sakafo ara-tsakafo amin'ny sehatry ny biolojia? Ho an'ny mpahay tantara sy ny filozofa siansa, ny sakafo dia fambolena fikarohana, satria mametraka fanontaniana fototra momba ny fahamarinan'ny lalàn'ny natiora (mahalala tsara ny lalàna rehetra momba ny metabolisma ve isika) sy ny rafitry ny fikarohana siantifika (izay mandoa ny fianarana amin'ny zava-mahadomelina azonao amin'ny labels?)
Ny sakafo koa dia ivon'ny fametrahana fanontaniana ara-bola ho an'ny filozofia politika.
Ireto ny sasany. One. Ny fanamby ateraky ny fihinanana sakafo eo amin'ny tontolo iainana. Ohatra, fantatrareo ve fa ny fambolena faktiora dia tompon'andraikitra amin'ny tahan'ny loto kokoa noho ny fiaramanidina fitateram-bahoaka? Roa. Ny varotra sakafo dia miteraka olana ara-drariny sy fitoviana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny entana hafahafa toy ny kafe, dite, ary sôkôla dia ohatra lehibe indrindra: amin'ny alàlan'ny tantaran'ny varotra dia azontsika atao ny manavao ny fifandraisana misy eo amin'ny kontinanta, ny fanjakana ary ny olona nandritra ny taonjato telo sy efatra. Telo. Ny famokarana, ny fizarana, ary ny varotra dia fahafahana hiresaka momba ny toetry ny mpiasa manerana ny tany.
Sakafo sy ny fahaiza-misaina
Amin'ny farany, rehefa miditra ny 'salantsalan'ny sakafo' farafahakeliny isan'andro ny olona iray, dia azo oharina amin'ny tsy fahampian'ny fahaiza-miaina na ny tsy fahampian'ny tena izy ny fandavana ny fahazarana misakafo amin'ny fomba mahomby. Satria ny fahaleovan-tena sy ny maha-azo itokiana dia anisan'ny lehibe indrindra amin'ny fanadihadiana filôzôfika, avy eo ny sakafo dia nanjary fanalahidy marina amin'ny fahitana filôzôfia. Ny tanjon'ny filozofia amin'ny sakafo dia noho izany ny fikatsahana sakafo tena izy , fikarohana iray azo mora kokoa amin'ny fandinihana ny lafiny hafa amin'ny 'fifandraisana amin'ny sakafo'.
The Paradox of the Tragedy
Inona no atao hoe herisetra ara-tsaina?
Filozofia sangisangy ara-tsaina: Funnies momba ny tena sy ny fahalalana
Inona no atao hoe paradigm shift?
Ny momba ny Akademia malaza Plato
Understanding Socratic Ignorance
Tombontsoa manokana sy fitaovana
3 Strate Stoic Ho Tonga Hifaly
Ny fototry ny fampiasana izany
Inona no atao hoe Liberaly?
Dinosaurs, Reptoids ary Reptilians
Mialà sasatra kely mba hanao fialan-tsasatra
Momba ny hakiviana nataon'i Christopher Morley
Ny Avogadro amin'ny ohatra Chemie olana olana
Miampita ny Reniranon'i Jordana - Famintinana tantara momba ny Baiboly
Open book 01.svg Anarana iombonana
Ahoana no nahitana ny archeopteryx?
Ahoana no handraisanao anjara amin'ny Volley ball
Iza moa i Marcel Breuer, Bauhaus Protege?
Fomba 4 hanampiana ny zanakao hikarakara ny tsy fananan-tany
Minor Triad Chords for Piano
Tantaram-piraketana an-tsarimihetsika sy famerenana
Hetsi-po an-jatony mampianatra ny manisa ny mari-pahaizana, mametraka ny lanjany, ary mihamaro
Toro-hevitra ho an'ny mpianatra mpianatra
Florida Southern College - Hevitry ny Wright
Fahatakarana ny teny "latabatra"
Ahoana ny fomba hanamboarana na hanamboatra fantsona fanofana
Famahanana data ho an'ny fanabeazana manokana
Sarin'ny Gay Wedding
Top 10 Free Chemistry Apps ho an'ny mpampianatra
Ireo karazana ambony Super Comic ao amin'ny DC Comic amin'ny fotoana rehetra
Plaindre - ho malahelo, manenina
Fitsarana ambony sy fanapahan-kevitry ny Fitsarana US